Orinasa mamafa toaka - China Mpanamboatra toaka alikaola, mpamatsy
Eye Glassess & Lensa mamafa
Gel fanadiovana tanana
Ny barika famonoana otrikaretina
70% Isopropanol namaoka
Maso solomaso, efijery ary fanadiovana solomaso
75% Alika fanadio lena amin'ny alikaola
Ny vidiny faran'izay ambany indrindra any Sina 75% famonoana alikaola dia mamafa ny kitapo 50PCS miaraka amin'ny RoHS & FDA ho an'ny fanadiovana isan'andro
Ny kalitao tsara dia voalohany; ny orinasa no lohalaharana; fiaraha-miasa kely dia fiaraha-miasa ”dia ny filozofianay momba ny orinasan-draharaha izay matetika voahaja sy arahin'orinasa ataonay noho ny vidiny lafo indrindra China 75% famonoana otrikaina alikaola 50PCS fonosana miaraka amin'ny RoHS & FDA ho an'ny fanadiovana isan'andro, mametraka ny tena izy sy ny fahasalamana ho tompon'andraikitra voalohany izahay. Ankehitriny dia manana ekipa mpanao varotra iraisam-pirenena matihanina izay nahazo diplaoma avy tany Amerika izahay. Izahay dia mpiara-miasa aminao manaraka. Ny kalitao tsara dia voalohany; t ...
Vokatra vaovao mafana China 50 PCS manadio ny fantsom-pahadiovana tsy misy toaka toaka fanadiovana akondro (W9)
Ny tetik'asa fitantanan-drafitra be dia be sy ny maodely ho an'ny mpamatsy 1 ka hatramin'ny iray dia manome ny lanjan'ny fifandraisana lehibe amin'ny orinasa sy ny fahazoantsika mora ny zavatra antenainao momba ny vokatra vaovao Hot China 50 PCS Sterilize Wipe Sanitary without Residual Alkohol Hand Sanitizing Ak alkohol Wipes (W9), noho izany. afaka mihaona amin'ny fanontanina samihafa amin'ny mpanjifa samihafa izahay. Azafady mba jereo ny tranokalanay hijerena vaovao misimisy kokoa avy amin'ny vokatray. Ny tetikasa be dia be mahatanteraka administrat ...
75% Hamafa ny alikaola
Sheet Material Non tenona, spun lace Sheet Size 120 * 150mm120 * 180mm (tsy voatery) 120 * 200mm (tsy voatery) Taratasy sy kitapo + Alv + PE PET + Alv + PE Bag Size 60 * 80mm Akora ilaina: alikaola 75%, Ro-rano LOGO Easy Wonderful O Customised SAMPLES Fampiasana maimaim-poana amin'ny famonoana mikraoba Ho an'ny fanadiovana ny tanana sy ny tarehy alohan'ny sakafo Na afaka manao izay takinao izahay. Andininy Vokatry ny vokatra: alikaola 75%, Ro-rano, tsy tenona endri-javatra: voaisy tombo-kase tsirairay, tsy manam-paharoa, tahan'ny Sterilisation 99,99% Function: madio ...
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fivarotana karazan-tsoasa lena, soloina alikaola, solo-drivotra, famafana solomaso, lamba famaohana ary fonosana sakafo, hazokely volotsangana ary kojakoja Aeronautika hafa.
Adress: No.1 Langliang Road (Chengguan Section), Chengguan Town, Distrikan'i Wuqing, Tianjin, Sina
Finday sy Whatsapp: + 86-15922283155
Hatreto dia tsy misy sel manokana sy manokana ...
Fandraisana anjara ho an'izao tontolo izao
Torohevitra: mamaly ny fanontanina lehibe momba ny ...
Vokatra mafana, Sitemap, Sunscreen Wipe, Taratasy fikasana tsara indrindra, Tissue fanadiovana lens, Famafana lamba isaky ny mifono,